Roob carruur dilay aqallana ku burburiyay Baydhabo
Photo | Muslimo Ibraahim oo aqalkeeda cusub ugu warramaysa Radio Ergo/Muxyadiin Xusni/Ergo
Radio Ergo 04 May, 2017 BAYDHABO
(ERGO) - Muslimo Ibraahim Macallin oo ah hooyo 22 jir ah waxay roobka toddobaadkan ka da’aya magaalada Baydhabo ku waysay gabadheeda oo labo sano jir ahayd, aqalkii ay ku hoyanayeen oo ka sameysnaa baco iyo ulo, iyo maacuun wixii u yaallay. Waxay ka mid tahay dadka soo barakacay ee deggan xerada Mogor iyo Maayow ee duleedka waqooyi ee magaalada, waxayna hadda ku hoyataa aqal kii oo kale ah oo ay dhismihiisa ka caawiyeen dadka xerada, sajaayad ay ku seexdaan oo keliya ayaana u dhex taalla.
Qabow ka dhashay roobka oo da’ayay afar maalmood oo xiriir ah dartiis waxa ay bannaanka magaalada u doontay xaabo ay ku diiriso raashinna ay ugu kariso carruurteeda oo ahaa gabadha dhimatay iyo wiil saddex jir ah. Hase yeeshee daad soo galay aqalka ayay ku hafatay gabadha. “Waxaan u imid gabadha oo ay biyo qariyeen oo fuurtay. Caloosha ayaan ka riixnay si aan biyaha uga soo saarno, laakiin wax dhaqaaq ah waan ka waynay,” ayay u sheegtay Raadiyo Ergo.
Muslimo inkastoo ay heshay gabbaad ay ka gasho roobka, haddana waxay ka walwalsan tahay in roobka oo weli socda uu ka dumiyo aqalkeeda cusub. Waxay saddex bilood ka hor ka soo barakacday tuulada Tigow oo 40 km u jirta degmada Qansaxdheere ee gobolka Bay kaddib markii ay abaartu qallajisay beertii uu qoyskeedu ku tiirsanaa. Keligeed ayaa Baydhabo timid, ninkeedana waxay uga soo tagtay si uu u ilaaliyo guriga iyo beerta ay ku leeyihiin tuulada.
Agaasimaha guud ee wasaaradda dib-u-dejinta ee maamulka Koonfur-galbeed, Liibaan Sheekh Shuceyb ayaa Raadiyo Ergo u sheegay in inta ay og yihiin ay labo carruur ah ku dhinteen daadadka ka dhashay roobka, sidoo kalena in 150 qoys oo ku barakacay lix xero oo ku yaalla Baydhabo ay ku hoy beeleen. Dadkaas oo dhan waa kuwii ka soo barakacay abaarta ka jirta gobolka Bay oo aan awoodin inay dhistaan aqallo waaweyn oo iska difaaci kara roobka.
Dadka aqallada ay ka burbureen qaarkood waxay caawimaad ka heleen dadka deegaanka. Maxamuud Cabdullaahi Keerow oo ah aabbe 43 jir ah ayaa ka mid ah dadka hoy-la’aanta ay haysato. Waxay xaaskiisa iyo shan carruur ah oo uu dhalay habeenkii saddexaad ku hoydeen guri deriskooda ah oo ay leeyihiin dadka deegaanka. Wuxuu weriyaha Raadiyo Ergo ee Baydhabo u sheegay in uu qorsheynayo isla marka uu roobka hakado uu dib u dhisto aqalkiisa oo ku yaallay xerada Liibaan 1 si uu culeyska uga qaado qoyska uu dulsaarka ku yahay.
Muddo bil ah ayuu joogaa Baydhabo oo uu go’aansaday inuu yimaado markii ay abaarta ka dishay 33 neef oo ari iyo lo’ ah. Lacag uu ka helay labadii neef ee u dambeysay xoolihiisa oo uu iibsaday ayuu gaari uga soo raacay tuulada Misir oo 56 km u jirta degmada Diinsoor ee gobolka Bay.
Keerow ma shaqeeyo, sidaas daraadeed qoyskiisu waxa ay wax ka cunaan raashinka ay karsadaan reerka ay martida u yihiin, mararka qaarna dad uu yaqaanno oo magaalada deggan ayaa caawiya.
Roob xooggan oo 100mm gaaraya ayaa ka da’ay deegaanno ka tirsan gobolka Bay sida uu xaqiijiyay Mashruuca Maamulka Biyaha iyo Dhulka ee Soomaaliya (SWALIM) oo ka tirsan ha’yadda Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay.